PTFE Sheet Factory - Sina PTFE Sheet mpanamboatra, mpamatsy
Famaritana: * Fitaovana: PTFE * Hateviny: 0.03mm * Lava: 8600mm / horonan-taratasy * Sakany: 1000mm * Loko: Fotsy * Vidiny: 21,6 ~ 24,6 USD isaky ny KG Endri-javatra: - Halavan'ny mari-pana miasa: -200-260 ℃ .- Avo Ny fanoherana ny harafesina, ho an'ny ankamaroan'ny akora simika sy solvents, mampiseho inert, mahatohitra asidra sy alkali, rano ary solvents organika isan-karazany. - Avo ...
Sheets PTFE Skives .001 "hatramin'ny .250" matevina
Skered PTFE sarimihetsika sarimihetsika dia namboarina avy amin'ny resina PTFE virijina izay namboarina, namboarina ary namboarina tamin'ny hateviny. Ny takelaka PTFE sy ny sarimihetsika dia be mpampiasa amin'ny indostria maromaro noho ny toetra miavaka amin'ny fitaovana, ao anatin'izany ny hafanana sy ny fanoherana ny simika, ny tanjaka diélectrika ary ny fananana manohitra ny hazo. Ny takelaka roa sy ny sarimihetsika dia mety ho voasokitra simika amin'ny lafiny iray na roa mba hamatorana azy. Ny takelaka sarimihetsika PTFE Skives dia misy hateviny manomboka amin'ny 0 ....
PTFE Sheet Film Thickness 0.2mm
PTFE / Polymer Film Sheet dia novokarin'ny fampiatoana ny resina PTFE aorian'ny famolavolana azy. Izy io dia manana fahaiza-manao tsara indrindra hanoherana ny harafesin'ny simia, sy ny tsy fahanterana, ary azo ampiasaina eo ambanin'ny -180C ~ + 260C tsy misy enta-mavesatra, ary izy io dia manana coefficients faran'izay ambany indrindra amin'ny akora matevina fantatra. Famaritana: Product Product: PTFE Sheet Main color: mangarahara Material: PTFE hateviny: 0.2mm na fanao Fampiharana: 1.Widely ampiasaina amin'ny hazavana indostria, ady orinasa, spaceflight, oilfield, sns 2.PTFE fitaovana manana ny ...
Taratasy PTFE 25mm matevina
PTFE, plastika mekanika fluoropolymer malefaka miaraka amin'ny fanoherana miavaka ny hafanana avo, ny simika, ny harafesina ary ny famotehana ny adin-tsaina. PTFE dia manasongadina hafanana mahavariana, hamafin'ny mekanika, fananana herinaratra sy fikorontanana ambany, mahatonga azy io ho safidy safidy ho an'ny fampiharana hafanana avo sy ambany. Ny plastika PTFE dia misy amin'ny mari-pahaizana eken'ny FDA, herinaratra, mekanika, feno vera ary mitondra. Famaritana: 100% Taratasy PTFE madio: loko Temp. Range: -350 ka hatramin'ny 50 ...
PTFE, plastika mekanika fluoropolymer malefaka miaraka amin'ny fanoherana miavaka ny hafanana avo, ny simika, ny harafesina ary ny famotehana ny adin-tsaina. PTFE dia manasongadina hafanana mahavariana, hamafin'ny mekanika, fananana herinaratra sy fikorontanana ambany, mahatonga azy io ho safidy safidy ho an'ny fampiharana hafanana avo sy ambany. Ny plastika PTFE dia misy amin'ny mari-pahaizana eken'ny FDA, herinaratra, mekanika, feno vera ary mitondra. Famaritana: * Toe-javatra: Vaovao * lafiny: 150mm * 150mm * 5mm na fanao ...
PTFE Film Sheet dia novokarin'ny fampiatoana ny resina PTFE aorian'ny famolavolana azy. Izy io dia manana fahaiza-manao tsara indrindra hanoherana ny harafesin'ny simia, sy ny tsy fahanterana, ary azo ampiasaina eo ambanin'ny -180C ~ + 260C tsy misy enta-mavesatra, ary izy io dia manana coefficients faran'izay ambany indrindra amin'ny akora matevina fantatra. Famaritana: Anaran'ny vokatra: Sheet PTFE Loko lehibe: Fitaovana fotsy: haben'ny PTFE habe: 500 x 500 x 0.5mm / 19.7 ″ x 19.7 ″ x 0.02 ″ (L * W * T) na fanao mahazatra. Famaritana: 1.PTFE dia azo ampiasaina amin'ny famolahana compression na extrusion ...